ရထားခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများမော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ2၏ 15 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဥရောပကကျွန်တော်တို့ကိုဟောလိဝုဒ်ဟောင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်အစဉ်အမြဲသတိရနေသည်. ထို့ကြောင့်, ဥရောပရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြို့ကြီးများ၏တမြို့တည်းအတွက်မြို့ပြဘဝဘဝ၌လှပသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုအမြဲဖြစ်ပါတယ်. ထမင်းစားခန်း, ယဉျကြေးမှု, အထူးလှည့်ကွက်များဖြင့် သမိုင်း၊, ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်ရှုခြင်းကို သက်သာစေသော ဗိသုကာလက်ရာ၊, များမှာ…